သီးသန့် Tapete Die!
သီးသန့် Tapete Die
ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေဆေးထိုးပုံသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦး trowel အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်. နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများကိုအားသာချက်များရှိသည်- နှင့်အားနည်းချက်များကို.
လိုက်တဲ့အခါပက်ဖြန်းတဲ့နည်းလမ်းတွေထွက်ရှိသောရှိပါတယ်3ဖျန်းအလွှာ, အရာအကြား၌အခြောက်လှန်းခံရကြလိမ့်မည်. ကပ်လျက်ဒေသများပက်ဖြန်းခြင်းမပြုမီ taped ရမည်ဖြစ်သည်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်. ကအလွန်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်နိုငျသော. ထို့ကြောင့်အချိန်အားသာချက်သေချာသောအခြေအနေများအောက်တွင်ပယ်ဖျက်ဖြစ်ပါတယ်.
ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး coarser ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတွက်ပက်ဖြန်းရလဒ်များကို. ဒါကြောင့်အချိန်ကိုချွေတာမှကြွလာလျှင်အ, သငျသညျအင်ျကြီကိုအတူတူပစ္စည်းကိုအတူမျက်နှာကြက်အပါအဝင်လူအပေါင်းတို့သည်မြို့ရိုး, သငျ့သ​​ညျ. ဖုံးအုပ်ထားသည့်အခါထိုအခါကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးသင်ကယ်တင်တော်မူ၏.
အကျိုးခံစားခွင့်: အထူးသဖြင့် coated ခံရဖို့ကြီးမားသောဒေသများနှင့်အတူငွေစုနှင့်ပျော်စရာအချက်တစ်ချက်လည်းပိုမိုမြင့်မားသည်အရေးပါသောအချိန်ရှိပါတယ်.
အရေးမသာခြင်း: တိပ်ခွေများအတွက်ကြိုတင်အလုပ်၏လုပ်နိုင်သောအများကြီးပေးရမညျ, ပျက်စီးနေသော၏ပြုပြင်ရေးသို့မဟုတ်. ညစ်ညူးဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင်နိုင်တည်နေကြလိမ့်မည်
ထိုအဆာအဘို့အသင်တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Kunststofftraufel လိုအပ်ပါတယ်. ဒီအတောင့်တင်းလွန်းသည်ဆိုပါက, ဒါကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်အမှတ်ပေးမှဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအတွက် trowel ၏ထောင့်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေရာမှာစံပြတစ်စက္ကူအထူဖြစ်ပါသည် 1,5-2 မီလီမီတာ.
အကျိုးခံစားခွင့်: အဆိုပါ trowel ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်နှင့်အာကာသ၏လုနီးပါးမျှမလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပါဘူး. သငျသညျကို non-အစွန်းအထင်းဝါဂွမ်းအင်္ဂတေကိုသုံးလျှင်, သငျသညျကိုပင်ကော်ဇောထွက်ခွာနိုင်. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ပြုပြင်ရေး.
အရေးမသာခြင်း: တိုးမြှင့်အာဏာကို- နှင့်အချိန်. အဆိုပါအတွေ့အကြုံ user က '' စမ်းသပ်မှုစတုရန်းလေးထောင့နှင့်အတူသာအနည်းငယ်သာအတွေ့အကြုံကသငျ့သ​​ညျ’ စုဆောင်း, တစ်ခုလုံးကိုအုတ်ရိုးကိုစတင်နေပြီခင်.
မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းအဘို့စင်ကြယ်သောသူဖြစ်ရမည်, အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ဂွမ်းအင်္ဂတေ၏အရောင်အတွက်ဖြစ်ထွက်ရှိသောကြမ်းတမ်းနှင့်. da der Baumwollputz CA.3အခြောက်ရက်အတွင်းလိုအပ်ပါတယ်, ရေတွင်ပျော်ဝင်အဖြစ်လည်းမဲဆန္ဒနယ်မှမြေအောက်တည်ရှိမထားရ, ဒါကြောင့်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအစက်အပြောက်ဖို့လာနိုင်ပါတယ်ကတည်းက. အမျိုးမျိုးသောအလွှာပေါ်မှာငါတို့မှတ်စုများကိုဖတ်ရှုပါ!
စင်ကြယ်ကြီးမားသောပလပ်စတစ်အိုးတလုံးကို ယူ. (Kunststoffwanne) နှင့် lukewarm ရေ၏ညွှန်းကိန်းများငွေပမာဏကိုထုတ်ဖြည့်ပါ (သားကောင်ကိုပွေးဖိအားကိုကြည့်ရှု) အတွက်. ထိုအခါထည့်သွင်းထားသည့်ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေမဝင်ရနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မွှေမှစတင်ဖို့. သာလက်ဖြင့်မွှေပေးပါဦး, လျှပ်စစ် stirrer ကိုသုံးဘယ်တော့မှမ.
ထိုအခါပစ္စည်းယခုနာရီဝက်သတိမပြုမိကြကုန်အံ့, ဤသို့ပူးတွဲကော်သတင်းရပ်ကွက် kann.Die အချိန်အကြမ်းဖျင်းသင်ကရောထွေးပစ္စည်းကိုအတူပါလာကြပါပြီဘယ်လောက်ဝေးတွက်ချက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. Danach nochmal alles ordentlich durchmischen.
ရောစပ်တဲ့အခါသင်သတိထားပါဖြစ်သင့်, သငျသညျကြောင့်ဖုန်မှုန့်မှဖြည်းဖြည်းချင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှိုးဆော်ကြောင်း. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ဖုန်သို့မဟုတ် offcuts မျှမ.
တစ်ဦးစံကွန်တိန်နာလုပ်နိုင်တဲ့အင်္ကျီကို IE ကို 5qm panel ကိုအတူ.
ဒီမှာအခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်ကိုလွှမ်းခြုံဖြစ်ပါသည်. သငျသညျသစ်ကိုငါတို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်ထုပ်ပိုးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုစံပြမိတ်ဆက်စကားပေးရမှ 1 m²ခွဲထွက်ရေး ab. ဤသည်ဧရိယာများအတွက်အမှန်တကယ်ခံစားအဆိုပါလွှမ်းခြုံm²ဖို့သင်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်.
ဒါကြောင့်, ထို Anquellphase ကျော်ယခုဖြစ်ပါတယ်. မှန်ကန်သော Verarbeitungskonsitzenz စစ်ဆေး, gespreitzen လက်သို့မဟုတ် trowel-Kunsstoff နှင့်အတူလယ်ကွက်ဆွဲအားဖြင့်. ဤသည်နောက်တဖန်အနောက်ကွယ်မှဖြည်းဖြည်းချင်းလာရမညျ. လုပ်နိုင်သောပင်ရေအနည်းငယ်ထပ်ထည့်ဝင်နိုင်.
အဆိုပါ Kunsstofftraufel မြို့ရိုးပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ကိုထိမိခြင်းနှင့်ပစ္စည်းအထက်တွင်မြင်နိုင်ကြောင်း. အခုတော့အထက်သို့ကို Kunsstofftraufel ဆွဲထုတ်, ထို့နောက် crisscross. ဤသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အညီအမျှဖြန့်ဝေ.
Die Kunststofftraufel sollte immer leicht schräg von der Wand weisen, also nicht flächig auf den Baumwollputz drücken. Dadurch entsteht die gewünschte Verarbeitungsstärke des Materials. ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်, ထို Reibeputz များကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ပွတ်. ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပစ္စည်းအထူ Keep. ဖြစ်နိုင်သည် entsandene ချောချောမွေ့မွေ့တဲ့အသံတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါသွင်းယူ, ပစ္စည်းခန်းခြောက်မီက.
အဆိုပါ primer ထိုမြို့၌ရှိသောထို granules အပေါ်ယံပိုင်းအားဖြင့် facilitated. အမွေးကြမ်းသောမြေမျက်နှာပြင်တဆင့်နိမ့်ဖိုင်ဘာရိုက်သွား, ဒါကြောင့်သင်အထက်တွင်ပိုလျှံပစ္စည်းကိုဖယ်ရှားဤသို့ပစ္စည်းအထူညှိ.
coating အခါသင်ပစ္စည်းအထူüberpüfenသင့်တယ်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, အင်္ကျီရဲ့မျက်နှာပြင်အတွက် Kunststoffftraufel ၏တစျထောင့်ကိုနှိပ်. ဤသူသည်သင်တို့ပစ္စည်းများ၏အထူခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြု.
စတင် point ကနေပယ်ရှားသငျသညျယခုအခါအသုံးချအပေါ်ယံပိုင်းကနေမြို့ရိုးအ Kunsstofftraufel အချို့သောပစ္စည်းကိုမှ perpendicular န်ထမ်းကိုရည်ညွှန်း.
ပစ္စည်းတုတ်၏အစွန်းမှာကျန်ရှိနေ Kunststofftraufel. အခုတော့ထောင့်မှ trowel ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အခန်း၏အလယ်ဗဟိုမှသူ့ကိုဆွဲထုတ်. သငျသညျအင်ျကြီကိုမှီတိုငျအောငျပြီးတော့အားလုံးအနားနှင့်အအူသင့်ရဲ့သွားရာလမ်းလုပ်မလုပ်.
ကျန်ရှိသောအကွောငျးအရာထဲကတစ်ဦးကိုအစားထိုး panel ကို customize.
သငျသညျအလုပျအတူပြုလိုက်တဲ့အခါဒီ tool clean.
ကိုအောက်ပါနေ့ကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသည်အထိအလုပျနှော. သင်သာနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်သတင်းစာပစ္စည်းနှိုးဆော်နှင့်နာရီဝက်အင်တိုက်အားတိုက်နှင့် ပတ်သက်. 40cm width ကိုမှရေပြွတ်နှင့်တဖန်ယခင်နေ့၏အနား processing ရဲ့ start ်ရှေ့တော်၌ CA ငယ်သင့်ပါ.
အရေးကွီးပါ note ကို: ထိုအပြောင်းအလဲနဲ့ CA သကဲ့သို့.2– 2,5 ဌရေကိုတစ်စတုရန်းမီတာလျှင်လိုအပ်နေပါသည်, သငျသညျသငျ့လျြောသောအစီအမံယူရပါမယ်, Wie z.B. အပူပေးစက်များအသုံးပြုခြင်း, Raumentfeuchtern, ပရိသတ်များသည်နှင့်တင်ဆက်, သောခြောက်သွေ့ရာသီ, ပင်ရာသီဥတုဆိုးရွားအတွက်, သုံးရက်ပတ်လုံးထက်မကျော်လွန်ပါဘူး.
ခြောက်သွေ့ရာသီ Exceeding ရှုတ်ချနိုင်ကြောင်း (z.B. Foxing) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ.
Falls die Rauhfasertapete sich nur sehr schwer entfernen lässt, können Sie diese ggf. mit Tiefgrund und zweimal Isolierfarbe streichen. Das ist dann jedoch auf eigenes Risiko, aber oft getestet. အရေးကြီးတာက, dass die Tapete sich nicht durch den nassen Baumwollputz löst und dann abfällt.
LeaveaReply to Sabine Sieke Cancel reply
© 2019 Redecorate | နှိပ်ရာ | သီးသန့်လုံခြုံရေး